DAAWO: Brazil Oo Si Sahlan Ku Garaacday Xulka Qaranka Japan, Neymar Jr & Gabriel Jesus Oo Shabaqa Soo Taabtay Iyo Marcelo Oo Gool Cajiib Ah Dhaliyay. – WWW.Gool24.net
DAAWO: Brazil Oo Si Sahlan Ku Garaacday Xulka Qaranka Japan, Neymar Jr & Gabriel Jesus Oo Shabaqa Soo Taabtay Iyo Marcelo Oo Gool Cajiib Ah Dhaliyay.
Xulka qaranka Brazil ayaa wali ku sii raaxaysanaya qaab ciyaareedka fiican ee ay koobka aduunka ugu diyaar garoobayaan waxayna 3-1 ku garaaceen xulka qaranka Japan. Neymar Jr, Gabriel Jesus ayaa min hal gool dhaliyay laakiin Marcelo ayaa kulankan lagu xusuusan doonaa kadib markii uu gool cajiib ah ka dhaliyay.
Neymar Jr ayaa lumiyay rekoodhe uu goolkiisa labaad ee kulankan ku dhalin lahaa markii uu garsoore Benoit Bastien uu caawin ka helay muuqaal caawiyaha garsooraha ee kulankii magaalada Lille ee dalka France ka dhacay waxaana Japan gool kale oo ceeb ku sii noqon lahaa ka badbaadiyay goolhaye Eiji Kawashima .
Tababaraha xulka qaranka Brazil ee Tite ayaa shaxdiisa isbadalo badan ku sameeyay si uu ka hor koobka aduunka u sii ogaado xidigaha ka baxsan shaxdiisa muhiimka ah ee uu ku xisaabtami doono waxaana kulankan ku soo bilawday Danilo, Jemerson, Guiliano si la mid ah xidigaha muhiimka ah Neymar, Gabriel Jesus, Willian, Marcelo iyo Casemiro.
Neymar Jr ayaa gool rekoodhe ahaa daqiiqadii 10 aad xulka qarankiisa hogaanka ugu dhiibay laakiin daqiiqadii 17 aad ayuu Marcelo dhaliyay goolka kulankan saaxiibtinimo lagu xusuusan doono oo gantaal ahaa isaga oo soo barbareeyay saaxiibkiisa Madrid ee Marcelo Asensio kaas oo gool kan la mid ahaa ka dhaliyay kulankii La Liga ugu danbeeyay Las Palmas.
Gabriel Jesus ayaa dhaliyay goolka saddexaad ee Brazil intii aan la gaadhin qaybtii hore ee ciyaarta isaga oo daqiiqadii 36 aad ciyaarta ka dhigay 3-0 ay Brazil hogaanka ku haysay laakiin qaybtii danbe Japan ayaa hal gool la timid waxaana daqiiqadii 63 aad goolka calanka u dhaliyay Makino.
BRAZIL (4-3-3): Alisson, Marcelo, Thiago Silva, Jemerson, Danilo, Casemiro, Giuliano, Fernandinho, Neymar, Jesus, WIllian
Philippe Coutinho iyo Roberto Firmino ayaan kulankan ka qayb qaadan iyaga oo ahaa badal aan la isticmaalin inkasta oo ay safan karaan kulanka Wembley Stadium ee ay Brazil wajihi doonto xulka qaranka England.
Brazil ayaa doonaysa in koobka aduunka ee Russia 2018 ay iskeento iyada oo ku jirta xaaladii ugu fiicnayd kadib waji gabixii ka soo gaadhay koobkii aduunka ee ay sanadkii 2014 kii dalkoodu marti galiyay kaas oo ay wali doonayaan in ay taariikhdiisii xumayd iska reebaan.
Halkan Ka Daawo Muuqaalka Goos Gooskii Kulankan: